पत्रकार महासंघ गैरपत्रकारको अखाडा (फरकमत) | सहारा टाइम्स
Home » Bichar » पत्रकार महासंघ गैरपत्रकारको अखाडा (फरकमत)
पत्रकार महासंघ गैरपत्रकारको अखाडा (फरकमत)
नेपाल पत्रकार महासंघको मौसम शुरु भएको छ । देशभरिका पत्रकारहरु रिचार्ज भइरहेका छन् । प्रत्येक तीन वर्षमा हुने पत्रकार महासंघको चुनावमा देशैभरिका पत्रकारहरु रिचार्ज हुने गरेको छ । तर बिडम्बना यसमा श्रमजिवी पत्रकार भन्दा बढी गैरपत्रकारहरु बढी रिचार्ज हुने गरेको देखिन्छ । पत्रकार महासंघलाई स्वतन्त्र संगठन भनिएपनि सबभन्दा दलीय राजनीति त्यही हुने गरेको छ । राजनीतिक दलको भातृ संगठनमा जति राजनीतिक हुँदैन त्यो भन्दा बढी राजनीतिक त्यहाँ हुने गरेको छ । महासंघहरुमा देखिएको विवादले त्यो कुरा पुष्टि भएको छ । नेपाली काँग्रेस निकट प्रेस युनियनले सदस्यता नविकरण विवाद समाधान गर्न माग गर्दै महासंघको कार्यालयमा ताल्चा लगाइएको थियो ।
यस मामलामा प्रेस युनियन कति चोखो हो, त्यो कुरा आफैले विचार गर्नुपर्ने हो । के महासंघको नेतृत्वमा काँग्रेस निकटको पत्रकार भएको भए आज प्रेस युनियनले ताल्चा लगाउने आँट गर्न सक्थ्यो त । महासंघको अध्यक्षमा एमाले निकट पत्रकार भएको कारणले नै पे्रस युनियनले आन्दोलन शुरु गरेको छ त्यो कुरा जगजाहेरै छ । अहिले आधा भन्दा बढी जिल्लाहरुमा सदस्यता सम्बन्धि विवाद छ, के त्यहाँ प्रेस युनियनले विवाद गरेको छैन । प्रेस युनियनले आफ्ना निकटका पत्रकारलाई जवर्जस्ती सदस्यता दिन चाहेका छैन ?
पक्कै पनि हो । मैले यो आरोप प्रेस युनियनमाथि मात्र लगाएको होइन । यो आरोप सबै दलका भातृ संगठनमाथि लागु हुन्छ । एमाले निकटका प्रेस चौतारी, माओवादी केन्द्र निकटको प्रेस सेन्टर अरु अरु दलका पत्रकारहरुको भातृ संगठनहरु पनि त्यतिकै दोषी छन् । कोही कम होला, कोही बढी होला त्यो छुट्टै कुरा हो तर पत्रकारहरुमा राजनीति गराउने दलहरु नै हुन् । यिनै दलीय पत्रकारहरुको कारणले पत्रकार महासंघहरु पार्टीको कार्यालय जस्तो भएको छ । जो असली पत्रकार हुन्, श्रमजिवी पत्रकार हुन् त्यसले पत्रकार महासंघको सदस्यता पाएको छैन । गैर पत्रकारहरु जो कुनै नकुनै पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता हुन् । अन्य अन्य व्यवसायी गरेर बसेका छन् । रिक्सा चालक, पान पसल, ठेकेदार, स्थानीय गुण्डा, छोराछोरी, भन्जाभान्जी, श्रीमान श्रीमतीहरु, सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारीलगायतले सदस्यता लिएका छन् र अहिले पनि त्यस्तै व्यक्तिहरुको फर्म बढी देखिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको शाखा रहेको प्रत्येक जिल्लाबाट एउटै गुनासो आउँछ, मैले सदस्यता पाइनन् । र, त्यसरी भन्नेहरु श्रमजिवी पत्रकार हुन् । सदस्यता नपाउनेहरु जो महासंघको केन्द्रीय कार्यालयसम्म पुग्छ वास्तावमा त्यो वास्तविक पत्रकार हुन् । गैरपत्रकारहरुलाई त सदस्यता लिन कुनै गाह्रो छैन । जो घरमै बसेर सदस्यता पाएका हुन्छन् । महासंघको सदस्य भएको समेत थाह हुँदैन त्यो पत्रकार होइन । पत्रिकामा कहिले काही गजल, कविता, लघुकथा छाप्नेहरु पनि आफूलाई पत्रकार भन्छन् । र, सदस्यता लिनेको लाइनमा बस्छन् । यस्तो किन हुन्छ ? महासंघको नेतृत्वमा जो हुन्छ त्यसले आफ्ना मान्छे अर्थात पार्टी निकटलाई मात्र सदस्यता दिएका हुन्छन् । उसलाई पत्रकारको सदस्यता होइन, भोटर मात्र बनाएको हुन्छ ।
पत्रकार महासंघको चुनावको बेला भोट हाल्न लाइन बसेका चेहरा हेर्नुस् तपाईलाई आफै लाज लाग्छ । पत्रकार भएकोमा हिनताबोध हुन्छ । थुक्क कस्तो संगठनको सदस्य बनेको छु भनि आत्मग्लानी हुन्छ । पत्रकार महासंघको चुनावमा श्रमजिवी पत्रकारहरु ओझेलमा परेका हुन्छन् । जो दिनरात पत्रकारितमा मेहनत गरेर जसोतसो गुजारा गरेका हुन्छन् उनीहरु ओझेलमा परेका हुन्छन्, ठेकेदार पत्रकार, पार्टीको पत्रकार, पसले पत्रकार, रिक्सा चालक पत्रकार, प्रहरी पत्रकार, सेना पत्रकारहरुको हालीमुहाली हुन्छ । चुनाव सकिएपछि ती पत्रकारहरुलाई तीनवर्षको अवधिमा कतै भेट्न सकिदैन । उनीहरु त्यही सदस्यताको आडमा आआफ्नो धन्दा गरिरहेका हुन्छन् र जो असली पत्रकार हुन्छ न्युज रुममा टाउको घोटी रहेका हुन्छ ।
यस्तै कारणले पत्रकारहरु न्याय नपाएको हो । पत्रकारको विकास यस्तै कारणले नभएको हो । यतिका मेडिया हाउसहरु खुलेका छन् । सबैमा पत्रकारको आवश्यकता छ । सबैले काम गर्ने पत्रकार खोजिरहेका छन् तर क्षमता भएका पत्रकार पाउन गाह्रो छ । महासंघकै पदाधिकारीहरु भन्छन्, यसपाली मात्र दुईसय भन्दा बढी नयाँ पत्रकारहरुले सदस्यता लिएका छन् रे, धेरैले सदस्यता नै पाइनन् भनि रोइ कराई भइरहेको छ । सदस्यता नपाएको र त्यसको विवादका कारण विभिन्न जिल्लामा लागेका ताल्चाहरु अझै खुलेका छैन । अब विचार गर्नुस् यो तीन वर्षमा यतिका पत्रकार उत्पादन भएका छन् तर मिडिया हाउसहरु भन्छन्, क्षमतावान पत्रकारहरु पाउन गाह्रो भयो ।’
त्यसैले यसपालीको पत्रकार महासंघको अधिवेशनमा यस्तो नियम बनाऔं, यस्तो मापदण्ड बनाऔं जसले गर्दा गैरपत्रकारहरु आफै साइड लागुन । जबसम्म यी गैरपत्रकारहरुको हालीमुहाली रही रहन्छ तबसम्म महासंघको अवस्था यस्तै रहन्छ । त्यसैले यसपाली विचार गर्ने हो कि ?